प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीबीच किन भैरहेको छ खटपट ? – मुलधार न्युज
Home > राजनीति > प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीबीच किन भैरहेको छ खटपट ?
३१ बैशाख २०७५, सोमबार १९:०५
बोर्ड अहिले वेलायती परियोजनाले राखेका महंगा परामर्शदाताले चलाइरहेका छन् । उनीहरुकै त्यहाँ हालिमुहाली छ । परियोजनाको खर्च, परामर्शदाताको पारिश्रमिक पारदर्शी हुनपर्छ भन्दै प्रश्न उठाएका सिइओ अधिकारी यस विषयमा अहिले मौन बसेको बोर्ड स्रोतले बतायो । वेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नियोग (डिएफआडी)को आर्थिक सहायता परियोजनामार्फत परामर्शदाताले तलब खान्छन् । परियाजना कसरी नेपाल भित्रिएको थियो भन्ने अहिले ऊर्जा मन्त्री रहेका पुनलाई राम्रोसँग थाहा छ । उनी त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए ।
२२ लाख रुपैयाँसहित नागढंगाबाट एक जना पक्राउ